အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: March 2010
အရမ်း အရမ်း အရမ်း ပျင်းနေပါတယ်...........
ခွင့်ယူလိုက်ပြီလေ ဒီလက ၆ ရက်နေ့ကို အစိုးရက ပိတ်ပါတယ် ဘာနေ့လဲတော့ မသိ စိတ်မဝင်စား စိတ်ဝင်စားတာ က ပိတ်ဖို့ ပဲ အဲ့တော့ ၅၊ ၇၊ ၈၊ ၉ ကို ခွင့်ယူလိုက်ပါတယ်။ နောက်အပတ်ကလဲ တပတ်လုံး သင်္ကြန်ပိတ်တော့ စုစုပေါင်း စနေ တနင်္ဂနွေတွေ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၁၇ရက်တိတိနားရပါမယ် ဝေး....................................ပျင်းလိုက်တာ.................ဒီနေ့ ပထမရက်ပါ ခုကတည်းက စပျင်းနေပါပြီ
စကားမစပ် နန်းညီက ပြောပါတယ် “ဒီမယ် ဘာကိစ္စ စားစရာတွေချည်းရေးနေရတာလဲ”.....တဲ့
အဲ့တာနဲ့ မရှိရှိတာထဲက ပြန်ရှာတော့ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွေတွေ့ပါတယ်.............
ပျင်းနေပါတယ်လို့ဆို...........(ထက်ထက်၏ အိညှောင့်သံလေးနဲ့ ချစ်စဖွယ်ဖတ်ပါရန်။)
ဒါလေးတွေက အရင်တပတ် အိမ်နားက Century ပလာဇာ သွားတုံးက ဝယ်လာတာတွေပါ။ တီ့မှာ ဝါသနာ တခုရှိတယ် အမေ့ဆီက ပါလာတာ အဲ့တာ က ပုံးတွေ ပလုံးတွေ ဘူးတွေ ကို ကြိုက်တတ် ဝယ်တတ် စုတတ် ဆောင်းတတ် တာပါပဲ။ ကြည့်လော့ အဆွေ..............အောက်မှာ ဝယ်လာတာတွေမနည်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဈေးမကြီးပါဘူး တခုမှ ၂၀ ဘတ်ပါပဲ။ ကြိုက်တာယူ ၂၀ ပါ.............အဲ့တာနဲ့ တီလဲ စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ အမျိုး ၄၀ ကျော်လောက်ဝယ်လာလိုကတယ် အေးရော.....
စုံစိနေတာပါပဲ ဘူးတွေ ပလုံးတွေပါတယ်။ တစ်ရှူးလဲပါတယ် အိမ်ကို ဧည့်သည် အလာများတဲ့အတွက် သူတို့ လာရင် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် သွားတိုက်တံလေးတွေက အစဝယ်ထားတယ် နောက် အိမ်သာထဲထည့်တဲ့ အနံ့တုံးလေးတွေ ခေါက်ဆွဲချက်စားရင် ရေဖျော်ပြီး စယ်တဲ့ဇကာ၊ အများဆုံးကတော့ ဘူးပါပဲ....ပုလင်းသေးသေးလေးတွေလဲပါသေးတယ်၊ နောက် ဘူးသေးသေးလေးတွေ ကို ဆေးထည့်ဖို့ အဲ့တာကတော့ တီ့ ပေါ့စတစ် သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးဖို့ ပါ။ အဲ့လို ဘုစုခရူတွေဝယ်ရတာလဲ ဝါသနာပါပါတယ် နောက်မှ သုံးတာ မသုံးတာက တကဏ္ဍပေါ့လေ
အင်း အဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လဲတွေးမိပါသေးတယ် ...........
အဲ့နေ့ကပဲ အခွေတွေဝယ်ခဲ့ပါသေးတယ် အခွေကတော့ ဘာဝယ်သလဲမမေးနဲ့ ကြုံလို့ နည်းနည်းကြွားပါအုံးမယ် တီက ပိုက်ဆံစရှာတတ်တဲ့ အရွယ်ကတည်းက ရသမျှ ပိုက်ဆံတွေက အခွေရယ် စာအုပ်ရယ်နဲ့ကုန်တာများပါတယ်။ အခွေဆိုတဲ့နေရာမှာ အရင် ကက်ဆက်တိပ်တွေကနေ နောက်တော့ စီဒီ အိမ်ပီ သရီးခွေ အကုန် ဝယ်သလို ရုပ်ရှင်ဆိုလဲ အရင် တိတ်ခွေကြီးတွေကနေ နောက်တော့ VCD DVD ခုဆို Blue ray ထိ အကုန်ဝယ်ပါတယ်။ စာအုပ်ကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့....ဒီမှာ ကြည့်ပါ ကြုံတုံး ဒါတွေက ဒီရောက်မှ ဝယ်ဖြစ်တဲ့ DVD တွေပါ ရန်ကုန်မှာ ကျန်ခဲ့တာတွေ တပုံကြီး ရှိပါသေးတယ် ရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီနေပါပြီ မြန်မာပြည်မှာနေတုံးက စနေ တနင်္ဂနွေဆို ရင် အမြဲ အခွေနဲ့ စာအုပ်အဝယ်ထွက်တဲ့နေ့တွေပါ ခုနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်ပြန်ရင်လဲ တခါတခါ ပြေးပြေးဝယ်ရပါသေးတယ် အဲ့တာတွေအတွက်က သပ်သပ် ၂ ရက် ၃ ရက် အချိန်ပေးရပါတယ် တခါတခါ နန်းညီတောင် ကန့်လန့်ကန့်လန့်ပါသေး.............း=) ရှူလော့ ချစ်ဆွေ
ကဲပါ ထားတော့ အကြွားချပ် နောက်ကြုံမှ စာအုပ်တွေကို ထပ်ကြွားမယ် ခုတော့ အစက စကား ကိုပြန်ကောက်မယ် အဲ့နေ့ကလဲ အခွေတွေဝယ်လာပါသေးတယ် အများစုကတော့ တရုတ်သီးချင်းတွေပါ နောက် ယိုးဒယား အဆိုတော် အမေရိကန်မှာ ကြီးတဲ့ ထားထားရန်း tata young အခွေ နှစ်ခွေပါတယ်(စကားမစပ် စီးတီး အက်ဖ် အမ်က လူတွေလေ ဗီဂျေ တွေပေါ့ တာတာရမ်း တာတာရမ်း နဲ့ခေါ်ပါတယ် အရမ်း အမြင်ကပ်ပါတယ် ဝေလုကျော်ကို ဝေဠုကြော် လို့ ခေါ်ပြီး ဒွေး ကို ဓွေး လို့ခေါ်နေသလို ခံစားရပါတယ် သြောင်QQ နဲ့လို့ မြင်ပါတယ် သတိထားသင့်ပါတယ် ကျားပေါက်ကလဲ မာရိုင်ယာ ခယ်ရီ ရဲ့ အီး အီးကွဲတူ အမ်စီ စကွဲ ကို အီးအီးကွဲတူ အမ်စီ တူး လို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အက်ဖ်အမ် က ကိုကိုမမတွေကို တခါပြောပြီးပါပြီ သူ့စာအုပ်ထဲမှာပါ ရှာဖတ်ကြပါ မဆိုးပါဘူး သူ့အရေးအသားက စိုးင်စိုင်းထက်ကောင်းတယ်လို့ တီမြင်ပါတယ် (တီ့တို့လို ကို့ဘလောခ် ကိုရေးပြီး ဖတ်တဲ့ လူ အနည်းငယ်ဆို ဘာပြောစရာလိုမလဲနော် ခုဟာက မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးကို လွှင့်နေတဲ့ အက်ဖ်အမ်လေ အမှားနည်းအောင် ဆင်ခြင်ကြဖို့ကောင်းတယ်နော် ရှိသေးတယ် ရှနိုင်းယား တွင်း ကိုလဲ ရှူနိုင်ယာ တွန်း လို့ ပြောပြောနေတဲ့ ကိစ္စ ပြောရင်တော့ ကုန်ဖွယ်မရှိပါ) ကဲထားတော့ အခွေဝယ်တဲ့ ကိစ္စဆက်မယ် အဲ့နေ့က ဒိုင်ဒို ရဲ့ တတိယ အယ်လ်ဘမ်ပါတယ် နောက် ရုပ်ရှင်ခွေ နှစ်ခွေ “ကို့ရဲ့ ဘလူးဘယ်ရီ ည” နဲ့ “စာဖတ်သူ” ဟိဟိ အမှန်က “ကို့ရဲ့ ဘလူးဘယ်ရီည” က ရှိပြီးသား မြန်မာပြည်မှာ ကျန်နေခဲ့တာ အရမ်းကြည့်ချင်လာလို့ ထပ်ဝယ်လိုက်တယ် အေးရော.....
နောက်တပုံပေါ့ ကဲကြည့်ရအောင် ဘာတွေလဲလို့နော် ..............ကြည့်...
ညဘက်ကျတော့ ထမင်း နှစ်လုံးချက်ပြီး (ဟုတ်ကဲ့ တယောက်တည်းကို နှစ်လုံးပါ နိူ့ဆီဘူး မဟုတ်ဘူးလေ ဟို ထမင်းအိုးတွေ ဝယ်ရင် တခါတည်းပါလာတဲ့ ကော်ဘူး နှစ်လုံးပြောတာ) ပြီးတော့ ပြောထားသေးတယ်လေ အပျင်းကြီးပါတယ်လို့ ထပ်မချက်ရအောင်ပေါ့ ငှဲငှဲ...နောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်းအိမ်မှာ အသင့် ရှိတဲ့ အကြော်အလှော်တွေနဲ့စားရပါတယ် ပျင်းထှာကွယ်... ဘာတွေလဲကြည့်ရအောင်
ပထမဆုံးက ငါးဖယ်ကြော် အရင်တနေ့ တီမုန့်ကနေ ကျန်နေသေးတာ၊ တယောက်ထဲနေရတာ အဲ့တာတွေတော့ စိတ်ညစ်ရတယ် ဟင်းကျန်တွေလေ ဟင်းကျန်တွေ ပစ်လို့ကလဲမဖြစ်ဘူးတော်ကြာ တီချမ်းဆိုတဲ့ အတူနေ ပစိပစပ်မက လာအုံးမယ် နင်ဒီလို စားသောက်နေရတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ ဘယ်သန်း ငတ်နေလဲသိလား ဘာညာ သူ့ပါးစပ်နဲ့မဆန့် ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး လူကို လာပြောအုံးမယ် အမြင်ကပ်တယ် ဟွန့် အဲ့တာနဲ့ အကျန်တွေလဲ စားစားနေရပါတယ် လို့..
အိုကေ ငါးဖယ်ဘေးက (ပုံကို ကလောက်စ် ဝိုက် ကြည့်သွားနော်) ဆတ်သားခြောက်ကြော် တနေ့က တီနဲ့ “လင်တူမယားညီအမ တော်တဲ့ မဝေ” ပို့လိုက်တာ ရန်ကုန်က (ဟိဟိဟိ နော် ဦးညီနော်) ပြီးတော့ ဘေးက ချဉ်ပေါင်ကြော် နောက် သူ့ဘေးက ဇွန်း အဲလေ...ပြောစရာလားနော် အိုင်ကျူမြင့်စာဖတ်သူကို စော်ကားတာ တီချမ်းနယ် ဇွန်းမှန်းတော့ လူတိုင်းသိတာပေါ့ အံမယ် အဲ့တာ ရိုးရိုး ဇွန်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ ကိုရီးယား ဇွန်း အရိုး ပိုရှည်တယ်
ကဲ တွေ့လားသူများသားသမီးတွေ များအဲ့လို မကြုံကြုံအောင် ကြွားတတ်တာ မိသစ်(ပန်းစကား) ကျနေတာပဲ ပြီးတော့မှ ဝက်သားခြောက်စပ်ကြော် (အသေကောင်းပါတယ် ကြက်သွန်ဖြူနီ မွမွလေးတွေနဲ့ ငရုတ်သီးနဲ့ ရှယ်ကြော်ထားတာ) ဒါကတော့ ချစ်ကိုကြီး ပဲခူးရိုးမ ဝက်ဝံဆီကပါ အဲ့တာလေးတွေနဲ့ ညစာကို ဖြစ်သလို ရုပ်ရှင်တဘက်နဲ့ တွယ်လိုက်ရပါတယ် အခြောက်တွေချည်းပဲမို့ (ဟင်းကိုပြောနေတာပါ တီချမ်းနဲ့ ဘာမှမဆိုင်)ဘေးကနေ ရေနွေးကြမ်းနဲ့မျောချရပါတယ် ကြုံလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ဖက်ခြောက်ကလဲ တရုတ်ပြည်နယ် စီချွမ်းဒေသ ကမ္ဘာ အကောင်းဆုံးနံပါတ် တစ် လက်ဖက်ခြောက် နဲ့ခတ်ထားတဲ့ မဟာ ဂန္တဝင် ရေနွေကြမ်းပါ (ပန်ဒိုရာ ရဲ့ ၂၀၀၈ ဧပရယ် ဖူးလ် ပိုစ့်ကို သွားဖတ်ပြီး ခပ်တည်တည် နဲ့ လိမ်ကြည့်ပါတယ် ရမလားလို့) ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော်ရှိပေါ့နော့ တယောက်ယုံလဲနည်းလားနော့ အလကားနေရင်း အထင်ကြီးခံရတာ နည်းတဲ့ ဘုန်းတန်းခိုးလားလေ ယောက်ျားတွေက ဘုန်းတန်းခိုး ပိုကြီးတယ်လို့ မှတ်ထင်တွေးယူ တတ်သူတွေ သတိချပ်သင့်ပါတယ်နော့ စကားတွေ ကြွားပြောတတ်ရင်လဲ မသိတဲ့လူတွေက အထင်ကြီးတတ်တယ်လို့ အဲ့တော့ ယောက်ျား=သောက်ကြွား အဲ အဲ နိုင်ငံရေးတွေပါကုန်ပြီ.........zippppped
ဒါကတော့ ထမင်းနဲ့ မျောချရတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ...“စာဖတ်သူ” တဲ့ အရင်က တခါကြည့်သေးတယ် ပျင်းစရာအရမ်းကောင်းလို့ ဆက်မကြည့်ဖြစ်ဘူး ဒီတခါတော့ သေချာကြည့်ဖြစ်တယ် တခါတခါ အဲ့လိုပဲ ရုပ်ရှင်တောင်အာရုံလာမှ ကြည့်လို့ကောင်းတာ ပြီးတော့ တိုက်ဆိုင်မှုရှိမှ ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့တခါက စာဖတ်ပြီး ပို့ပေးဖူးတဲ့ ကောင်လေး ကိုတောင် သတိရမိသေးတယ် (သူကတော့ စာတတ်ပါတယ် တမင်ဖတ်ပြတာ နားထောင်ချင်တယ်ဆိ်ုလို့ မနော်ရဲ့ တစုံတယောက်ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကိုဖတ်တာပါ ဂျူးရဲ့ မြရဲ့လ ကော ရေမျောသီး ကောမဟုတ်ပါဘူး ဟေမာနေဝင်းနဲ့ ထူးအိမ်သင်ဖတ်တာ အရင် ကက်ဆက်ခေတ်တုံးက နားထောင်ဖူးတယ် )
ကဲရေးရင်းနဲ့ သွားရည်ကျရပြန်ပါတယ် ထားတော့ ဆက်မယ်.......
ဒီပို့စ် ကို ၃ ရက်နေ့ စနေ က စရေးတာပါ ခု ၅ ရက်နေ့ တနင်္လာမှ ပြီးပါတယ် ပျင်းနေပါတယ်လို့ဆို ....ဟွန့်
Posted by တီချမ်း at 10:24 PM9comments: Links to this post
မနေ့က ၂၉ရက် ၃လ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ပါ။ ဘန်ကောက်မြို့ကြီး မိုးတွေရွာပါတယ်။ သင်္ကြန်အကြိုမိုးပဲလား ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုတွေလား တီချမ်းပဲ မဟုတ်တာတွေလုပ်တာများလို့ မိုးနတ်မင်းက သတိပေးနေတာလား (ဘုရား ဘုရား) ပြီးတော့ ရုံးကအပြန် နောက်ကျပါတယ်။ အခုက ၁၀ နာရီ ၆ နာရီ ဆင်းနေလို့လေ။ ပြောပါအုံးမယ် တီက မနက်မနက် မထနိုင်ပါဘူး။ ညဘက်ကျတော့ တော်တော်နဲ့မအိပ်ဘူးလေ။ ၃ ၄ နာ၇ီလောက်မှ အိပ်တာ။ အဲ့တော့ ရုံးအမြဲနောက်ကျပါတယ်။ တော်သေးတာပေါ့ဘော့စ်က အလုပ်ပြီးရင် အိုကေတဲ့ ဘောစ့်မို့လို့ ပြီးတော့တီတို့ တခါတလေ ဝစ်ကန်းတွေကော ညဘက်တွေကော လိုရင် လိုသလို အမြဲ လုပ်နေတာသိလို့လဲပါပါတယ်။ ပြီးတော့ တီတို့ရုံးက အချိန်ကို ကြိုက်တဲ့အချိန် အထက်အရာရှိနဲ့ ညှိယူလို့ရပါတယ်။ ၆ နာရီ တက်ရင် ၃ နာရီဆင်း။ ၇ နာရီတက်ရင် ၄ နာရီဆင်း စသဖြင့်ပေါ့လေ။ အဲ့တာနဲ့ တီကတော့ ၁၀ နာ၇ီတက်ပြီး ၆ နာ၇ီဆင်းတာကို အခု ယူထားပါတယ်။ နောက်တခါ အိမ်ကို တိုက်ရိုက်မပြန်ချင်သေးတာနဲ့ ပါရာဂွန် က ဂေါမန့် မားကတ် ကိုဝင်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အသားလေး ငါးလေးဝယ်တာပါ။ တပတ်စာ နှစ်ပတ်စာပေါ့လေ။ အများကြီးဝယ်လာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတခေါက်ဝယ်လာတာ ဝက်လျာတချောင်း၊ ကြက်အမြစ် နှစ်ဘူး၊ နှလုံးချည်းပဲတဘူး၊ (အသဲမစားပါ) ဒီမှာက အတွဲလိုက်မဟုတ်ဘူး သပ်သပ်စီ သန့်ထားပြီးသား လိုချင်တာ ဝယ်ယုံပဲ (တယ်အဆင်ပြေ)။ ပြီးတော့ ပေါင် ၅ ချောင်း၊ အတောင်ပံ ၁၀ ချောင်း ဘာချက်ရမလဲမသိသေးဘူး၊ ပေါင်ကတော့ နောက်နေ့ကျ မှိုနဲ့ တရုတ်ချက်ချက်စားမယ် စိတ်ကူးထားတာပဲ။ တီက ပျင်းတော့ တခါတခါဝယ်ရင် အဲ့လို အများကြီးတခါတည်းဝယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲပစ်ထားတတ်တာများပါတယ်။ တခါတလေ ခရီးထွက်ရတော့မယ်ဆိုရင် ရေခဲသေတ္တာရှင်းရတာ က ကို တဒုက္ခ။ ပစ်ရတာတွေအများကြီးပါ။ ဝယ်တာပဲဝါသနာကပါတယ် ကုန်အောင်စားခဲတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ချက်ရင်လဲ သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးကိုခေါ်ကျွေးရတာပါ။ ဆိုင်မှာသွားစားရင်လဲအဲ့လိုပဲ အများကြီးမှာရတာ ကိုကြိုက်တယ် ပြီးတော့မှ ကုန်အောင်အသေစား မစားနိုင်တော့လဲ တီပြောနေကျ စကားတခွန်းက ဘာတဲ့ “မစားချင်တော့ဘဲနဲ့ အလကား သက်သက် နှမျောလို့ အဝခံမစားနဲ့” တဲ့ မိုက်တယ်နော် ပြီးတော့လဲ အစား အသောက်တွေ ကုန်အောင်မစားတဲ့လူတွေကို တော့ ဒီလိုပြောတတ်ပြန်ပါတယ် “မင်းဒီလို စားနေသောက်နေရတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာမှာ လူဘယ်နှသန်းက ငတ်နေလဲဆိုတာ သိလား” ဘာညာပေါ့ အလုံးကြီးကြီးတွေ သွင်းတတ်ပါသေးတယ်။ အော် လူ့အလို နတ်မလိုက်နိုင်နော်။ တကယ် တရားကျပါရဲ့ (ကို့ကိုကိုပြောတာပါ) ကိုကို့ကို မဟုတ်ဘူးနော် (ကိုယ့်ကို ကိုယ်) အလွယ်ရေးတာ။ မမကွမ်ကို အားကျလို့ ခိ...အံမယ် ခုတော့ သူက မှန်နေပြန်တယ်နော် ပြောတဲ့သူတွေကသာ မှားနေပြန်တာ အော် အသင်လောက အပြောင်းအလဲ တယ်မြန်သော ကလော်ကလယ် အသင်လောက ပါကလား....ဟူး................ကဲ စကားပြန်ကောက်မယ် (ဘယ်လိုကောက်လဲမသိပါ ပြောနေကျမို့သာပြောတာ သေချာတော့နားမလည်) ပြီးတော့ ရှိသေးတယ် ဘုန်းကြီး ကိုဆွမ်းကျွေးတွေ ဘာတွေအတွက် ပင့်ပြီးရင် ဘုန်းကြီးထောက်ရတယ်တဲ့ တီကတော့ ငယ်ငယ်က ခပ်ရွဲ့ရွဲ့နဲ့တွေးတာ ဘုန်းကြီးကိုထောက်ရင် ဘုန်းကြီးက ခေါက်မှာပေါ့လို့ (ဟဲဟဲ ဒီလိုပေါ့ ဒါမျိုးတွေနဲ့ ကိုတာရာက လုပ်စားလေ့ရှိတယ်။ ) ကဲကဲ စကားပြန်ကောက်မယ်......ပါရာဂွန်မှာဈေးဝယ် ပြီးတော့ မုန့်တီဖတ်တွေတွေ့တာနဲ့ ဝယ်လာသေးတယ် ရခိုင်မုန့်တီချက်စားမယ်ပေါ့။ တလောက ၇န်ကုန်က သူငယ်ချင်းလာတော့ အရင် တီ့အိမ်လာတည်းသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ တပည့်တွေက ထည့်ပေးကြတဲ့ထဲက ငါးဖယ်ကြော်တွေကျန်သေးတယ်။ မုန့်ဟင်းခါး ချက်မလို့ဟာပဲ။ ဒါပေမယ့်…. ခုနက ပြောပြီးပြီလေ ပျင်းနေပါတယ်ဆို။ အဲ့တော့ မုန့်တီပဲ လွယ်လဲလွယ် စားလို့လဲကောင်း။ ကဲ ပြောနေကြာတယ် ချက်လိုက်ကြစို့ လာ………….
ပထမဆုံး မုန့်တီချက်ဖို့ အသင့်စား အထုပ်လေးတထုပ်ပေါ့ သူကတော့ ရေ နို့ဆီဘူး နှစ်လုံးပြောတာပဲ တီကတော့ တအိုးပဲ လာထား.....တီ့ထုံးစံ အစာပလာတွေထည့်အုံးမှာလေနော့ တံဆိပ်က အိမ့်စည်းစိမ်ပါတဲ့ ဘေးကတော့ တီ ထည့်မယ့် အစာပလာတွေထဲက ကြက်သွန်ဖြူပါ တီက မုန့်တီ ဟင်းရည်ဆိုရင် ကြက်သွန်ဖြူတွေကိုပါ ထောင်းရုံထောင်းပြီးထည့်ထားတဲ့ အရည်မျိုးကို ချက်ချင်းပြေးမြင်ပါတယ်။ ငါးလေးတွေ ကင်ပြီးထည့်နိုင်ရင် ပိုကောင်း................ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနော် ကင်မှာ ပိုမွှေးအောင်
ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကြက်သွန်ဖြူ ကို ထောင်း ပြီး တခါတည်းထဲ့ ဆူအောင်တည်.........အရေးကြီးတဲ့ အခန်းက ခုမှလာတာပါ ထုံးစံအတိုင်း မဟာဟင်းရည်ပဲပေါ့ အရေးကြီးလာပြီလေ မှတ်ထားကြပါ သားတို့သမီးတို့ မုန့်တီ ဟင်းရည်က တခြား ဟင်းရည်တွေနဲ့ မတူပါဘူး ဟင်းရည်ကျ ဖို့လိုပါတယ် ဘယ်လို ကျရမလဲဆိုတော့ ဆူလာရင် မီးအေးလေးနဲ့ နည်းနည်းကြာကြာလေး တည်ထားပေးရပါမယ် ပြီးရင် ချို ငံပေါ့ မြည်းပေးပါ လိုရင် ဆား ဟင်းချိုမှုန့် (အာဂျီနိုမိုတို..............) ငံပြာရည် ထည့်ပေးပါ။ တီကတော့ တိုင်းပြီးယက်တဲ့ ပကလာ ဆိုသလိုပဲ တည်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက အိုကေပါ ဂွတ်ရှယ်ပဲ ဘာမှကို မပြင်ရတော့ဘူး လက်ဆိပ်က ကောင်းတာ အဲ့လို (အော် ဘယ်တတ်နိုင်မလဲနော် မွေးကတည်းက ဘုရားက ရုပ်ကိုလဲချောအောင် ဟော ပညာဆိုလဲ တော်အောင် ငွေရှာလဲ ကျွမ်းအောင် ဖန်ဆင်းပေးထားတာတာကိုးနော် ဒီကြားထဲ ဟင်းချက်ကလဲကောင်း အင်း.............ဖြူဖြူ့စကားငှားသုံးရရင်တော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပဲ ချီးမွမ်းပါတယ်လေနော် )
သရက်သီးနဲ့ ရေနွေးကြမ်း စိမ်းကတော့ အထွေအထူးပြောစရာမရှိပါ ပြောစရာရှိတဲ့ ကြက်ဥ ပုတင်း ခေါ် ခရမ်းဘရူးလေ ကိုပဲပြောတော့မယ် အောက်မှာကြည့် ....
အင်္နီးကပ်ကြည့်ပါ အမှန်ကတော့ ကြက်ဥပေါင်းပါပဲ ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့် ပေါ့လေ စပယ်ရှယ်ထက်ကို ပိုရှယ်တဲ့ ကြက်ဥပေါင်းပါ သေချာကြည့်ပါ ဈေးလဲကြီးပါတယ် အဲ့ဒီ ခွက်သေးသေးလေး ဖြုတ်မျက်စိလောက်လေးကို ဘတ် ၁၀၀ ပေးရတာပါ ၃ ဒေါ်လာ တိတိ မြန်မာ ကျပ်နဲ့ဆို ၃၀၀၀ ကျပ် တိတိ အံမလေးလေး စီးတီးမတ်မှာဆို ပူတင်း ကိတ် ဘယ်နှတုံးတောင်ဝယ်စားလို့ရသလဲ ကဲပြော...........
သူက ကြက်ဥပေါင်းကို စပယ်ရှယ် နို့အနှစ်တွေနဲ့ အီဆိမ့်နေအောင် လုပ်ပြီး သကာလ အပေါ်မှာ သကြားရည် ကို မီးမြိုက်ပါတယ် ဆိုင်မှာ သွားဝယ်ရင် လုပ်တာ တခါတည်းကြည့်လို့ရပါတယ် အဲ့လိုကောင်းသော ပါ တီကတော့ ဆရာသော်တာဆွေစကားအတိုင်း ၇၅ ခုလောက်တောင်စားလိုက်ချင်ပါသေးတယ်လို့ ...
မိသစ်၊ ဗစ်၊ မျိုး၊ ဆာကူရာ၊ မေ ဘယ်သူတွေကျန်သေးလဲ အကုန်ခေါ်လိုက် လာစားလို့............
Posted by တီချမ်း at 12:10 AM 12 comments: Links to this post
ဒီနေ့ နဲ့ အနီ၊ မနက်ဖြန် ဘယ်လိုလဲ
ခုတလော ယူအန် ကို သင်တန်းပေးနေရတယ်ဆိုတာ ပြောပြောနေလို့ သိပြီးကြပြီနော်
ဒီနေ့ သင်တန်းသွားပေးတော့ စီးနေကြ မော်တော်ဆိုင်ကယ်က တခြားလမ်းကနေ မောင်းပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ လမ်းတွေပိတ်ထားလို့ပါတဲ့ ဟင် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့ ကို က မေ့ကိုမေ့နေတာပါ အဲ့တာပဲကြည့်တော့ အဲ့လို ဟင်စရာတွေ ကို ဘယ်လောက်တောင်စိတ်မဝင်စားလဲဆိုတာ
အရင်တပတ်က ဝုန်းဝုန်း ဝုန်းဝုန်း ဖြစ်ကြသေးလို့ ရုံးတွေ ဘာတွေပိတ်လို့ တီချမ်းတယောက် ပျော်နေသေးတာကော ခုတော့လဲ အကုန်မေ့ အဲ့လို ပါ (အပူအပင် ကင်းတာများပြောပါတယ်လေ)
ဒီနေ့တော့ ကိုတိုင်နဲ့ဝင်တိုက်တော့မှသာ အော် သူတို့ လုပ်နေကြတုံးပါလားပေါ့
နောက် ကိုမသိသလိုနေနေတာ သူတို့ အစိုးရ က ခုတလောလေးကမှ အသစ်ကြေငြာထားတဲ့ ဥပဒေနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ် ဘယ်အရင် မနှစ်က သင်္ကြန် အနီတွေ လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ် ဖြစ်ကြတုံးကဆို မိချမ်းတို့ကလဲ ရွရွ ရွရွပေါ့လေ
အိမ်နဲ့လဲနီးတယ်မှလား သွားတောင်ကြည့်လိုက်သေး အနုစာဝါရီ လို့ခေါ်တဲ့ Victory Monument မှာ
ခုတော့လဲ ကိုနဲ့မဆိုင်သလို မျက်နှာလွဲခဲပစ် လုပ်နေတယ်လေ အော် ဥပဒေက ဘာလဲဆိုတော့ နိုင်ဂံဂျား တားတွေ ပါရင် ပြန်ပို့မယ်တဲ့ (အိ.......................) Deported လုပ်မယ်လို့ပြောပါတယ် မီးကကြောက်တာပေါ့လို့ နူကလိုခ (ယိုးဒယားလို သမီးကြောက်တယ်လို့ပြောတာပါ)
အဲ့တော့ အစကလဲ ဝါသနာက မပါဆိုတော့ ကင်းကင်းနေလိုက်တာ ဆက်လက် အေးငြိမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြဆဲဆိုတာတောင်မသိတော့ပါဘူး
အောက်မှ တီ ယူအန် အဝင်ပေါက်ရှေ့နားကနေ ရိုက်ယူလာတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပါ Tank တွေထိုးပြီးတော့ ကို ကြီးကြီးငယ်ငယ် ကျားမမရွေး ယူအန် ရှေ့က ပါရာမီတာ တခုလုံးကို ပိတ်ထားကြပါတယ် အမှန်က အစိုးရ အိမ်ရာ ကိုပိတ်ထားတာပါ ယူအန် ကလဲပါတာပေါ့ သူတို့က အစကတည်းက လျှာရှည်ပြီး နီးနီးသွားနေကြတာကိုးနော့ အဲ့မှာပဲ ချက်ပြုတ်ကြ စားသောက်ကြ အိပ်စက်ကြပါတယ် တီ ဒီနေ့ သင်တန်းပေးပြီးပြန်လာတော့ နှစ်ချက်ထိုးလေ အမယ် တချို့တွေများ နေ့လည်နေ့ခင်း ခြေခင်းလက်သာ တရေးတမောတောင် အိပ်နေကြသေး အေးလေ ဘာမှလုပ်စရာမရှိတာာ အဓိက က ပိတ်ထားပြီးတော့ လိုချင်တာတွေတောင်းနေကြတာပဲလေ
အံမယ် အနီတွေကလဲ ဘူဇွာကြတယ်ဆရာ
အဲ့လို လာပါ လာအိပ် လာပြ ကြတဲ့ ယိုးဒယားနိုင်ငံသား တယောက်ကို တနေ့ ဘတ်ငွေ ၂၀၀၀ ပေးပါသတဲ့ အစိမ်းဆိုရင် ၇၀ လောက်ရှိမယ်နော် အဲ့တာ တယောက်ချင်းစီကိုပေးတာ
တအိမ်လုံးသာထွက်လာကြလို့ကတော့ ကေပဲ တနှစ် လေးခါလောက်သာ ဒီလိုလုပ်ကြ အဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ စားလို့လောက်တယ် တနှစ်လုံး တနေ့ ၂၀၀၀ ဆိုတာ နည်းတာမှမဟုတ်တာ တီတို့ဆို တနေ့တနေ့ ဖတ်ဖတ် လျှာ အတောင့်လိုက်ထွက်အောင် လုပ်မှ အဲ့လောက် ပျော့ပျော့ရတာလေနော့ ဒီလိုပါပဲလေနော် လက်လှုပ်မှ ပါးစပ်လှုပ်ရမဲ့ဘဝ နှစ်ရက်လုပ်မှ တရက်စားရတဲ့ဘဝဆိုတော့လဲ (သနားကြပါ ရဲလေးလေသံနှင့်ဖတ်ရန်)
ပြီးတော့ ဒီနေ့ အဲ့ဒီ အနီ ဆိုင်ကယ်စီးပြီး ပြန်လာလိုက်တယ် ပြီးရော သူတို့က လမ်းတွေပိတ်ထားတော့ တက္ကစီတွေ တခြားဆိုင်ကယ်တွေက မှဝင်ခွင့်မရဘဲ အံမယ် အဲ့ဒီ ဆိုင်ကယ် သမားက ဝေါ့ကီ တော့ကီ နှစ်ခု ခါးမှာချိတ်လို့နော်.. အလန်ဇယားဆရာ ကဲကဲ ပုံတွေကိုရှု....(နာဂစ်ကိုတောင် သတိရသေး tank တွေနဲ့နေကြတာမို့ပါ) ပုံတွေက သိပ်တောင်မကောင်းဘူး ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေ ဖုန်းနဲ့ ခိုးရိုက်ရတာမို့လို့
တော်ကြာ ကို့ကို ဖမ်းသွားရင် ဘယ်နဲ့ လုပ်မလဲနော် (တီကတော့ အော်မှာပဲ လူကို ကြိုက်တာသာလှုပ်ပါ ပစ္စည်းတွေကိုတော့ ချမ်းသာပေးပါလို့ တခုခုအရင် လုပ်ရင်တော်သေး ဟိဟိ)
ဒါကတော့ တီနဲ့တူတူ သင်တန်းပေးနေတဲ့ မမဂျပန် က ပို့ပေးတာပါ မနက်ဖြန်ကျရင် ဒီလို ပိတ်ထားပါမယ်တဲ့ တီတို့သွားရမယ့်နေရာ ယူအန် ပင်မ အဆောက်အအုံက အပြာလေးနဲ့ ပါ ရှာကြည့်ကြ။ အနီတွေက ဒီလို ပိတ်ထားတာနော်
ကဲ မနက်ဖြန် တီ့အတွက် ဆုသာတောင်းနေကြပေတော့ မေတ္တာပို့ကြပေါ့အေ
သေရင်တော့ မပို့တဲ့ လူတွေကို လာခြောက်မှာပဲ
Posted by တီချမ်း at 11:02 PM3comments: Links to this post
17 နှစ်ရဲ့ မိုးကောင်းကင်
A: အင်း...အချစ်ဆိုတာလဲ အတိတ်တွေလိုပဲ ကျော်လွန်သွားတတ်တဲ့အရာပါ
B: ရပါတယ် ကိုယ်တို့ မြန်မြန်ပြေးကြတာပေါ့...
B: သူကို ပြန်မှီလာအောင်ပြေးကြမယ်လေ..
A: ဒါပေမယ့်...ကျတော် ညောင်းနေပြီ...
B: ကိစ္စမရှိဘူး ကိုယ်မင်းကို ကုန်းပိုးမှာပေါ့....လာ...!
Posted by တီချမ်း at 10:02 PM 1 comment: Links to this post
နောက် နည်းနည်းထပ်ဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင် တီတို့ရဲ့ body defense mechanism ခန္ဓာဗေဒရဲ့ အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုစနစ် (အင်း အီးလိုပြောရတာ ပိုလွယ်တယ် မြန်မာလိုက ရှင်းရခက်တယ်) က ဥပမာ လက်ကို ဓါးရှတယ်ဆိုပါတော့... လက်က ဥပမာနော် ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ….သွေးက ငှောက်တောက် ပန်းထွက်တာမှလား… ကဲခုနပြောတဲ့ ဥပမာကိုပဲ ပြန်ကောက်မယ်နော် အရင်လူက ဓါးရှတယ်၊ သူ့မှာကလဲ ကံဆိုးစွာပဲ ပိုးရှိတယ်။ ကို့ကိုလဲထပ်ရှတယ်။ ကဲ အချက်၎ချက်နဲ့ ချိန်ကြည့်ရအောင် ပထမ ၃ ချက်မကိုက်ဘူးလား။ ကိုက်နေပါတယ်နော်. အဲ နောက်ဆုံးအချက်လေ ကိုယ့်ဆီကသွေးကလဲ ပန်းထွက်လာတာလေ ပန်းဝင်သွားမှ မဟုတ်တာ။ အဲ့တာဆိုရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ တီ့စာဖတ်ရင် လူလည်ချည်းပဲပေါ့။ ဒီလောက်ပြရင် အကုန်မြင်လောက်ပြီနော်။
Perhapsamore widely trusted source would be the US CDC, and here's their info sheet, which also says the same thing:
Posted by တီချမ်း at 10:58 PM 13 comments: Links to this post
Happy Birthday နန်းညီ
နန်းညီ နဲ့ ဟိုက္ကူများ
Posted by တီချမ်း at 10:53 PM5comments: Links to this post
တီချမ်းရဲ့ တပတ်တာ ဝခ်ကန်း ဟော်လီးဒေး
တကယ်ပါပဲ သက်ပြင်းရှည်ရှည်နဲ့ စရမယ့်လပါ (သက်ပြင်းက တော်တော်ရှည်ပါတယ် နှာခေါင်းနဲ့ဘယ်လိုဆန့်သလဲမသိ-ဒါကိုတာရာ့ စကားပါ ခဏယူသုံးတယ်)
လအစကတည်းက သေသေချာချာ ကောင်းကောင်းနားရတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဆက်နေလိုက်တဲ့အလုပ်တွေဆိုတာ တရုတ်ပြည်က မဟာရံတံတိုင်းအလားမှတ်ရပါတယ် (အတိသယဝုတ္တိပါ။) ခုလဲ နှစ်ပတ်ဆက်တိုက် တော်တော်ကို အလုပ်များပါတယ်။ ခုတပတ် ပိတ်ရက်ပဲ သေသေချာချာ နားရပါတယ် (အနီတွေကိုတောင် ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ရမလိုပါပဲ) သူတို့ကြောင့် သောကြာနေ့ကတည်းက ရုံးပိတ်ပေးပါတယ်။ ကိုယ်တို့ရုံးက သူတို့ ချီတက်ဆန္ဒပြကြမယ့်နေရာနဲ့နီးနေလို့ပါ။ (တယ်ကောင်းနော် တနင်္လာပါဆက်ပိတ်ရင် ပိုကောင်း ကောင် ကောင့် ကောင်းပဲလို့တွေးနေပါတယ် အောင်မြင်ပါစေ ဝေးဟေးဟေး) ဒါပေမယ့် ပြောသာပြောတာပါ ကိုယ်က အခု ယူအန် ကို UN CARE programme အရ သင်တန်းပေးနေပါတယ် (ဂျပန်မ တယောက်နဲ့တွဲပြီးတော့ ကဲရေခဲတောင် တီ့အလုပ်အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ အရိပ်အမွက်နော်) အဲ့တော့ သောကြာနေ့က ရုံးပိတ်ပေမယ့် နေ့တဝက် လုပ်ရပါတယ်။ ညနေကျတော့ နားရတာနဲ့ အနှိပ်ကောင်းကောင်း သွားခံလိုက်ပါတယ် thai traditional massage က နှစ်နာရီနဲ့ aroma therapy massage က တနာရီပါ (ဟုတ်ကဲ့ တုံးလုံးချွတ်ရပါတယ် ဆီတွေနဲ့လေ ခိခိ ဤကား စာရှုသူများအတွက် ဗဟုသုတ ရစေခြင်းအလို့ငှာ စကားချပ်) ပြီးတော့ အိမ်ပြန်လာပါတယ်။ နောက် အိမ်ရောက်တော့ သားနဲ့သမီး (မွေးစားများက) စီယံပါရာဂွန် (ရှော့ပင်းမော ဖြစ်ပါတယ်) သွားမယ်ဆိုလို့ သွားကြပါတယ် ပြန်လာတော့ ဘာဝယ်လာတယ်ထင်ပါသလဲ? SONY home theater system ပါ ဟုတ်ကဲ့ sound box5လုံးနဲ့ပါ။ ပုံကိုရှုလော့အဆွေ စာဖတ်သူ။ (ကြွားကြွားကြွား တီတီချမ်း ငကြွား)
အသံရေရေလည်လည်ကောင်းပါတယ် တုန်နေပါတယ် (အိမ်ပြောတာပါ) တဒုံဒုံနဲ့ပါပဲ။ တို့ ရွာက အော်လံကြီးတောင် သတိရမိသေးတယ်တော့။
ညကျတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ပွဲခံကြပါတယ် သားနဲ့သမီးလဲပါတာပေါ့ ဝယ်လာတဲ့ စက်ကို စမ်းတဲ့အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတာပေါ့ jhonny depp ရဲ့ the ninth gate ပါ။ ကိုယ်ကတော့ ကြည့်ရင်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ မနေ့ညက ကောင်းကောင်းမအိပ်ရပေဘူးကိုး။ မနက်ကျတော့လဲ သင်တန်းသွားပေး။ ပြီးတော့ အနှိပ်ခံဆိုတော့ မအိပ်ရဘူးလေ။
နောက်တနေ့ မနက်ကျတော့ အိပ်ရာစောစော ထပါတယ် ၁၁ နာရီထင်တယ် (ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တာ စောပါတယ် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ အတွက်ဆို တကယ့်ကို တော်တော်စောတဲ့ တော်တော့ စောပါ။ တီက စနေ တနင်္ဂနွေဆိုရင် များသော အားဖြင့် ညနေအထိအိပ်ပါတယ် တလောကဆို အိပ်တာ ဘယ်အချိန်မှ ထလဲဆိုတော့ ည ၈ နာ၇ီ ခွဲပါ ဟုတ်ကဲ့ ပုံမှန်ကတော့ ညနေ ၄ ၅ နာရီပေါ့။ အဲ့လိုပါ။ ကောင်းကောင်း အိပ် ကောင်းကောင်းစားပါတယ် ပြောဖူးတယ်လေ စားတာနဲ့ အိပ်တာက သာ ကိုယ့်အတွက်ပါလို့ နော့။
ထားပါတော့ စနေ နိုးတော့ အိမ် နဲ့ ရထား တမှတ်တိုင်သာဝေးတဲ့ Victory Monument က Century plaza ကို သွားပါတယ် မနက်စာစား ဟိုကြည့် သည်ကြည့်ပေါ့လေ။ အဲ့မှာ ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ ငါးတွေ နှိပ်တာ ခံခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့တာပြောပြချင်တာပါ။ အဲ့ဒီ fish massage က တွေ့နေတာ ကြာပါပြီ။ စိတ်ကူးထဲမရောက်ပါဘူး။ အဲ့နေ့က တော့ လူက ပျင်းပျင်းရှိနေတာနဲ့ အနှိပ်ကလဲ ဘယ်လိုအနှိပ်မျိုးမဆို ကြိုက်ပါတယ် (discriminate မလုပ်တတ်ပါဘူးလေ) ကဲနှိပ်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး နှိပ်ကြည့်တာပါ။ မဆိုးပါဘူး။ အမှန်တော့ သူက သရပီ တမျိုးပေါ့ ကိုယ့်တို့ ခြေထောက်မှာ ကြမ်းကြမ်းလေး ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်မှလား။ dead cells တွေလေ။ ဥပမာ ခြေမျက်စိနား ခြေမျက်စိ တည့်တည့် ခြေခုံ ခြေဖနှောင့် စသဖြင့်ပေါ့။ အဲ့ဒီ မာနေတဲ့အရေပြားတွေကို ငါးလေးတွေက ကိုက်ပေးတာပါ။ ဘာငါးလေးတွေလဲတော့ ကိုလဲ သေချာမသိဘူး။ တက်ထရာလေးတွေနဲ့တူသလိုလို ငါးကြင်းပေါက်စလေးတွေနဲ့လဲတူပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နှစ်မျိုးလုံးမဟုတ်တာတော့လဲ သေချာနေပြန်ပါတယ်။ ထားပါတယ် ဘာငါးလဲက အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာက ဇိမ်ရှိတာပါ။ ရေရေလည်လည် မိုက်ပါတယ်။ အစပိုင်းကတော့ အသေယားပါတယ်။ လူက တဟိဟိ ဖြစ်နေပါတယ်။ (ဆရာသော်တာဆွေရေးတဲ့ ဝတ္ထုဖတ်နေရသလိုပါပဲ) ပြီးတော့ အစပိုင်းမှာ စူးသလိုလဲခံစားရပါသေးတယ်။ အပ်သေးသေးလေးတွေနဲ့ တပြိုင်တည်း ထိုးနေသလိုမျိုးပါ။ အရမ်းနာနာကြီးတော့လဲ မဟုတ်ဘူးလေ ယားရုံပေါ့။ အဲ့လိုပါ။ မိုက်ပါတယ်။ ကြုံရင် စမ်းကြည့်ကြစေချင်ပါတယ်။ ၁၅ မိနစ်ကို ဘတ် ၉၉ပါ။ ၃ ဒေါ်လှပေါ့။ ပြီးသွားတော့ ခြေထောက်က တော်တော်သန့်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်ပါ။ တကိုယ်လုံးတောင် လုပ်ချင်တာ လူမြင်ကွင်းမှာဆိုတော့ မကောင်းတတ်လို့ ဟိဟိ။ တကိုယ်လုံးသာ လုပ်ရင်လဲ အော်ရယ်နေရမှာလို့တွေးမိပြီး မျက်နှာက ပြုံးစိစိဖြစ်နေပါသေးတယ်။ သူက ရှော့ပင်းမော အလယ်ကောင်မှာဆိုတော့ လူတွေဖြတ်သွားဖြတ်လာရှိနေပါတယ်။ ကိုယ့်မျက်နှာက ယားလို့ ပြုံးစိစိဖြစ်နေတာ လူတွေကတော့ (အော်သူသွားရှာပြီလို့ထင်နေတော့မှာပဲ)။ ပုံတွေလဲရှုပါအုံးလေ။
နောက် ညဘက်ကျတော့ မအိပ်ပါဘူး။ ခုတလော အာရုံတွေ ပြန်လာနေလို့ တီချမ်းရဲ့ အချစ်ဒဿန များ ပြန်ရေးနေပါတယ် နေ့တိုင်း တင်တင်နေတာ လေး ငါးရက်လောက်တောင် ရှိုပြီ။ အပိုင်း-၂- ဆိုပြီးတော့ပါ။ အဲ့တာလဲဆက်တင်ဖို့ရှ်ိပါတယ်။ အဲလက်စ် နဲ့ ရိုစီ ကိုလဲ ပြစ်မထားပါဘူး။ ဂျီတော့ကနေ တဂျီဂျီ လာလာ ဂျီတိုက်နေတဲ့ စာဖတ်သူတွေကို တော့ အားနာပါတယ်။ (အဲ့တာကြောင့်တခါတည်း ပြောလိုက်တယ် ဝတ္ထုသာ ဝယ်ဖတ်ပေတော့ လို့ သူ့ English လို အော်ရီဂျင်နယ်လေ။ ပြောပါတယ် အီး လိုဖတ်ရတာ ပျင်းတယ်တဲ့။ (ဒေါ်ရီတာ့ အမျိုးများလားမသိ….^^) အဲ့တာဆိုလဲ စောင့်ပေတော့ ပေါ့နော်။ နောက် အကြွေးတခုကတော့ ငါမင်းကို တိမ်တွေပေါ်မှာ ချစ်မယ်ဆိုတာပါ။ မေ့ကုန်ကြပြီလားတောင် မသိ။ စာရေးတာနဲ့သာ ထမင်းစားရရင်တော့ တကယ်ငတ်မှာပါပဲသေချာပါတယ်။ ခုတလော ဆရာသော်တာဆွေ ရဲ့ ဘဝ ဇတ်လမ်း ၅ အုပ်တွဲ ဖတ်နေပါတယ်။ ဝယ်ထားတာကြာလှပြီ။ ခုမှ ဖတ်ဖြစ်တာ။ အပိုင်း ၄ မရှိပါဘူး။ နောက် လပြန်ရင် သွားရှာရပါမယ်။ ခု ဖတ်တာ က အပိုင်း ၂ ပဲရှိသေးတော့ အိုကေပါပဲ။ ထားပါတော့ ခုနက ပြောနေတာ ပြန်ကောက်ရရင် အချစ်ဒဿန များ ပြန်ရေးနေပါတယ်။ နောက် ကျတော့ ပိတ်ရက် ထုံးစံအတိုင်း မနက်ကျမှ အိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၄ နာရီ လား ၅ နာရီလား မသိပါဘူး။ မအိပ်ခင် ကြက်သားတွေ ခဲနေတာ ပျော်အောင် ရေခဲသေတ္တာထဲက ထုတ်ထားလိုက်သေးတယ်။ နိုးလာရင် ချက်မယ်ပေါ့။ အော် မေ့လို့ ဘာချက်မလဲဟုတ်လား။ ဘာမှမချက်တာကြာပြီလေ။ အဲ့တော့ စာလေးလဲ ရေးဖြစ်အောင် (ခုရေးနေတာကိုပြောတာပါ) နောက် လျာရင်းလဲ မျက်မျက်လေးစားရအောင်ဆိုပြီးတော့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲချက်မယ်ကြံပါတယ်။ မချက်ဘူးပါဘူး တခါမှ။ အရင် ၂ လပိုင်းထင်တယ် ရန်ကုန်ပြန်တုံးက အော် ၁ လ ပိုင်းတုံးက ဟုတ်တယ်။ သင်တန်းပြန်ပေးတုံးက အမတယောက်က ချက်နည်းရေးပေးလိုက်ပါတယ် (ကျေးဇူးပါ မသီတာ)။ အဲ့တာနဲ့ ကြက်သားချထားပြီး အိပ်လိုက်တာ ပြန်နိုးတော့ ၄ နာရီပါ။ ၁၀နာရီခွဲ တုံးက ဆေးထ သောက်လိုက်တာ မှတ်မိသေးတယ်။ ပြီးတော့ အမ တယောက် အိမ်မှာ နှစ်ရက်လောက်လာနေမယ်ဆိုတာ ရောက်လာလို့ တံခါးထဖွင့်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ သူရှော့ပင်းသွားမယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားတော့ ကိုလဲ ပြန်အိပ်တော့တာပဲ။ ၄ နာရီနိူးတော့ ကိုယ့်ကြက်သားတွေ အကုန်ပုရွက်ဆိတ်တွေတက်နေတာပါ။ မဲနေတာပဲ။ ပုရွက်တွေအုံနေတာ။ အဲ့တာနဲ့ ရေဆေးချလိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့ မှ အောက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း အဆင့်ဆင့်ပေါ့ ချက်ထားတယ်။ စားလို့ (ဟင်း…………………ခေါင်းမှခေါင်း) မာမီး ခေါက်ဆွဲမဟုတ်ပါဘူး။ တီချမ်း အုန်းနိူ့ခေါက်ဆွဲပါ။ ရှုလော့ အသင်။
ကဲထုံးစံအတိုင်း ပုံလှလှလေးတွေနဲ့ စချက်လိုက်ကြရအောင်နော်....
ပထမဆုံး ကြက်အသားတွေ ကော အရိုးတွေကော ဟင်းရည်ရအောင် အရင်ပြုတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း ဆယ်ပြီး ခဏ အအေးခံထားပါမယ်။
နောက်တဆင့်အနေနဲ့ကတော့ ပုံထဲက အတိုင်း အသားမျှင်လေးတွေရအောင် နွှာထားပါမယ်။ ပထမပုံက အတောင်ပံ နွှာလို့ရတာနဲ့ ဒုတိယ ပုံက အရိုးက နွှာလို့ရတဲ့ အသားတွေပါ။ ပြီးရင်တော့ နွှာပြီး ကျန်တဲ့အရိုးတွေကို ဟင်းရည်အိုးထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါ။ ပိုချိုတာပေါ့။
ပဲစိမ်းမှုန့်ရေဖျော်ပါ။ ရေအေးနဲ့ပဲဖျောရပါတယ် ရေနွေးမသုံးရပါဘူး။ ဘေးကတော့ နို့စိမ်းဘူးနဲ့ အုန်းနို့ဘူးပါ။ တီကတော့ လျာရှည်ပြီး နှစ်မျိုးစလုံးထည့်ပါတယ်။ တမျိုးထဲကို လုံလောက်အောင်ထည့်လဲရပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတာ ပြောပြတာပါ။ တချို့က အုန်းနို့မှ ကြိုက်ပါတယ်။ နာမည်ကိုက အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကိုးလေနော်။ ဒါပေမယ့် ခေတ်ကာလ ပြောင်းလဲလာတော့ လူတွေခမျာ ရောဂါထူပြောလာပါတယ် အုန်းနို့က တက်တယ်။ သွေးတိုးတယ် ဘာညာ စသဖြင့်ပေါ့လေနာ်။ အဲ့တာနဲ့ တမျိုးထွင်ပြီးတော့ နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲဆိုတာ ချက်လာကြပါတယ်။ တီကတော့ နှစ်မျိုးစလုံးပေါင်းထားတဲ့ အုန်းနို့ နို့စိမ်း ခေါက်ဆွဲပါ (ရှည်တာပေါ့အေ နော့ ချက်ရင်းနဲ့တောင် ဒေါ်ဒေါ် သစ်ကို သတိရမိသေးတယ် သူဆိုရင်တော့ကြိုက်လိုက်မယ့်အမျိုးလို့) နောက် ဘေးနားက ပဲသွေးပါ (ဟုတ်ကဲ့ ဘဲမဟုတ်ပါ။ သက်သတ်လွတ်ပါ ပဲနဲ့လုပ်ထားတာပါ တီကတော့ ကြိုက်လို့ များများထည့်ပါမယ် ကြိုက်တတ်ရင် ငါးဖယ်လေးတွေ ကြော်ထည့် ဘဲဥ ပြုတ် ဓါးနဲ့ ပါးပါးလှီး ပြီးထည့် ပိုကောင်းပါတယ် တီကတော့ ဘဲဥ ကို ဟင်းရည်ကျက်ခါနီးမှာ သတိရတဲ့အတွက် မထည့်လိုက်ရပါဘူး အင်း...............အသက်တွေလဲကြီးလာတော့ မှတ်ဥာဏ်တွေလဲမကောင်းတော့ပါဘူး အေတို့ရယ် တီတီချမ်းကနေ အဖွားချမ်းဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါ့)
ဒါကတော့ ခုန က နွှာထားတဲ့ ကြက်သားတွေကို ကြက်သွန်နီ ဖြူ ကြိတ်ထားတာတွေနဲ့ ဟင်းချက် အစိမ်းမှုန့်လေးခတ်ပြီး ဆီပျံလာအောင် ကြော်ပေးပါတယ်။ မွှေးလာတဲ့အထိပေါ့။ တီက မြန်မာ ပြည်သား အထုပ်ကိုလဲ ထည့်တဲ့အတွက် အဲ့မှာ ပါတဲ့ ဟင်းဆီ အနှစ်ထဲကို မှ ကြက်သားထည့်ကြော်တာပါ။ သူ အထုပ်ကတော့ ရေဆူဆူထဲ ပါတာတွေ အကုန်ထည့်လိုက်ရင် ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တီကတော့ အဲ့လို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း မချက်တတ်တဲ့အတွက် အခုလို တမင် အလုပ်ရှုပ်ခံပါတယ်။ အရသာကောင်းကောင်းစားချင်ရင် တီချမ်းလို သေသေချာချာ ချက်ရမှာပေါ့နော့။ မြန်မာဟင်းတွေက ဘာပဲချက်ချက် မွှေးလာတဲ့အထိချက်ရမယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ နောက်တခါဆို ထပ်ထပ်မပြောတော့ဘူးနော်။ တီ့စာဖတ်တဲ့သူဆိုတာ IQ မနိမ့်မှန်းသေချာပြီးသား (ရေးချင်တာတွေရေးနေတော့ ဖြည့်ဖြည့်ဖတ်ရတာကိုးနော်) မွှေးသွားရင် အောက်ကပုံလို ဖြစ်သွားပြီး လှလာပါမယ်။ မြည်းကြည့်ပါ ချိုချဉ်ငံပေါ့။ ကေတယ်ဆိုရင် ကေပါပြီ။ ခဏဖယ်ထားပါမယ်။
ဟင်းရည် ဇာတ်လမ်းပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ခုန ပထမဆုံး တည်ထားတဲ့ ဟင်းရည် နွှာပြီးသား အရိုးတွေပြန်ထည့်ပြီးတည်ထားတဲ့ ဟင်းရည် ဆီလေးတွေ ဝေ့တယ်ဆိုရုံလေး သန်းနေတဲ့ ကြက်သားဟင်းရည် စသဖြင့် နာမဝိသေသနတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ဟင်းရည် (စကားမစပ် တီတို့ ဆွေမျိုးစဉ်ဆက် သုံးလာခဲ့ကြတဲ့ ဟင်းရည်ကြည်နေအောင်ချက်နည်းမဟာကို အရင် တခါ ပိုစ့်မှာဖော်ပြပြီးသားနော်) ကို ပြန်ဆူအောင်တည်လိုက်ပါမယ်။
ပထမပုံက ဟင်းရည်ရိုးရိုးပါ။ ဆူအောင်တည်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဒုတိယပုံမှာ ပြထားသလိုပဲ အုန်းနို့နဲ့ နို့စိမ်းကို ထည့်လိုက်ပါ။ တခါတည်းမှာပဲ အစကနဦးက ရေအေးနဲ့ဖျော်ထားတဲ့ ပဲစိမ်းမှုန့်ကိုလဲထည့်ပါမယ်။ အအေးတွေထည့်လိုက်တဲ့အတွက် ဆူနေတာတွေခဏပြန်ကျသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဆူလာအောင် ဆက်တိုက်တည်ထားပါမယ်။ ပြီးရင် တခါ ခုနက ချက်ထားတဲ့ ကြက်သား ကိုထည့်ပါမယ်။ အုန်းနို့ဆီတွေ ဝေ့တက်လာတဲ့အထိတည်ပေးပါမယ်။ ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ ပဲသွေးတွေထည့်လို့ရပါပြီ။ တခါထပ်ဆူပြီးရင် အရည်နည်းနည်းကျအောင် မီးအေးလေးနဲ့တည်ပေးပါ။ ပြီးတော့ အချို ပေါ့ ငံ မြည်းလိုက်ရင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း အရသာရှိတဲ့ အုန်းနို့ နို့စိမ်းခေါက်ဆွဲတအိုးရတာပေါ့။
တခုပဲ ပဲသွေးကို အိုးချခါနီးမှာ ထည့်ပါ။ သူက ကြာကြာ ချက်စရာမလိုဘူး။ တော်ကြာ ပျော်ပြီး ပျောက်သွားမှာစိုးလို့။
ဒါတွေကတော့ မြန်မာပြည်သား အထုပ်ထဲကပါတဲ့ မုန့်ကြွပ် အကြွပ်ကြော်တွေ ငရုတ်သီးတွေ ကြက်သွန်ကြော်တွေ နဲ့ မနေ့က ပါရာဂွန်က ဝယ်လာတဲ့ ခေါက်ဆွဲပါ။
ကဲ ကြည့်။ တီကတော့ ခုနက ပြောတဲ့ အကြော်တွေ မကြိုက်လို့ ရိုးရိုးပဲစားပါတယ်။ ဟင်း...............................ခေါင်းမှ ခေါင်း.................တီချမ်းခေါက်ဆွဲ..............
မြည်းချင်ရင်လာကြနော်။ မကုန်သေးဘူး တအိုး ကျန်သေးတယ်။ မနက်ဖြန်အတွက်….
Posted by တီချမ်း at 11:53 PM 10 comments: Links to this post